Chrome 91 inouya nerutsigiro rweWebSocket zvikumbiro pamusoro peHTTP / 2. | Linux Vakapindwa muropa
Kugadzirirwa ichi Chipiri, Chivabvu 25, uye vhiki nhanhatu mushure me v90, Google ichavhura nhasi Chrome 91. Iyi ndiyo yekupedzisira huru yekuvandudza kune yako webhu bhurawuza, kunyange hazvo shanduko huru dzakaitirwa kune vanogadzira. Nekudaro, ini ndingati hongu, ichi chiitiko chine chakakosha nekuti hachina kusukwa, asi hachizodzike munhoroondo seimwe yeinonakidza kwazvo.
Iyo yapfuura vhezheni yakauya neshanduko senge iyo nyowani API yeiyo yakawedzera chokwadi kana rutsigiro rweAV1 encryption, uye pakati peiyo nhau dzakatanhamara izvo zvasvika pamwe ne Chrome 91 isu tine kugadzirisa mune imwe API, iyo yekuwana kune iyo faira system, kana rutsigiro rwekungochinjisa otomatiki OTP (kamwe-nguva mapassword) kubva kuSMS. Pazasi iwe une runyorwa rwechinonyanya kufadza shanduko.
Chrome 91 inosimbisa
Faira sisitimu yekuwana API yekuvandudza.
Tsigiro ye otomatiki OTP kuchinjisa. Iyo WebOTP API yakagadziridzwa zvakare.
Iyo itsva iyo inokutendera iwe kunama kuverenga-chete mafaera kubva ku clipboard, iyo yaitarisirwa muChannel 90, ichaitwa kubva nhasi.
Port 10080 ichavharwa sezvo 554 yatovharidzirwa HTTP, HTTPS uye FTP.
Tsigiro yezvikumbiro zveWebSocket pamusoro peHTTP / 2.
Iyo API yakaunzwa kuitira kuti vanogadzira vatorese maapplication avo kune webhu, sezvo Chrome Apps dzakamiswa mwedzi unouya.
Kumwe kuvandudzwa kwevanogadzira.
Kuburitswa kweChannel 91 ichave yepamutemo chero nguva, saka ichakurumidza kuoneka seyakagadziridzwa uye inogona kutorwa pasi kubva yavo webhusaiti. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vano dhawunirodha pasuru inoenderana nekuparadzirwa kwedu, kunyangwe mune vamwe, senge iwo anobva paArch Linux, tinogona kuiwana muAUR. Tichifunga kuti iwo enharaunda-anochengetwa mareti, zvingangotora nguva yakati rebei kuti usvike mune idzi kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 91 inosvika nerutsigiro rweWebSocket zvikumbiro pamusoro peHTTP / 2 uye nekuvandudza kwevagadziri
Inkscape 1.1 inosvika gore mushure mekutanga yakagadzikana vhezheni yakatakurwa nenhau